Nzuzo bu ikike di nkpa ma nye ndi mmadu na ulo oru ohere ijikwa data ha. N'ihi mmụba nke iwu na ụkpụrụ iwu nke European na mba na njikwa siri ike na nnabata nke ndị na-elekọta ọrụ, ụlọ ọrụ na ụlọ ọrụ enweghị ike ileghara iwu nzuzo ugbu a anya. Ihe atụ kachasị mara nke iwu na ụkpụrụ nke ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụlọ ọrụ ọ bụla ma ọ bụ ụlọ ọrụ ọ bụla ga-agbaso bụ General Data Protection Regulation (GDPR) nke batara n'ime European Union dum. Na Netherlands, etinyerela iwu ndị ọzọ na GDPR Mmeju Iwu (UAVG). Isi nke GDPR na UAVG dabere n'eziokwu na ụlọ ọrụ ọ bụla ma ọ bụ ụlọ ọrụ ọ bụla na-ahazi data nke onwe ya kwesịrị iji nlezianya na nghọta doo anya.